Isaladi "Ukuthambekela" ngezinkukhu kanye nomlimi owuhlaza kufanele uqinisekise igama layo. Phela, isidlo esinjalo esingenasici esenziwe ngemikhiqizo elula futhi engabizi kuyabonakala sihle kakhulu futhi sincibilika emlonyeni. Futhi kufanele kuqaphele ukuthi le isaladi engavamile ilungiselelwe imizuzu engu-40.
Isaladi esiphundu nephunga elimnandi "Ukuthambekela": iresiphi ngesithombe
Izithako ezidingekayo ze-dish:
Inkukhu yeqanda noma iqhwa - 500 g;
Amakhukhamba amancane amancane - ama-3 ama-pcs.;
Amaqanda amakhulu inkukhu - izingcezu ezintathu;
Imifuno (uthenge ngaphandle kwembewu) - 120 g;
Ama-walnuts, ingilazi ehlutshiwe - ½ engaphakathi;
I-iodizedi yelinesi - engeza uma inyama ebilisa;
Idayi elisha ne-parsley - engeza ukunambitha;
Imayonnaise enamafutha aphansi - kusuka ku-170 g (ekuqondeni komuntu siqu).
Inqubo yokucubungula inyama yenkukhu emhlophe
Isaladi "Ukuthambekela" ngezinkukhu kanye nemifula kuyadingeka ukukwenza ngokusetshenziswa kwezinkukhu ezimhlophe. Kumelwe kuthengwe ngobuningi be-500 g bese ubilisa emanzini amancane anelisiwe kuze kube sekugcineni. Ngemva kwalokho, amabele kudingeka ahlile emoyeni, ngaphandle kwe-cartilage, isikhumba, amathambo futhi aqoshiwe ngokucophelela kuwo wonke amafayili.
Inqubo yokucubungula izithelo ezomisiwe
Isaladi "Ukuthambekela" ngezinkukhu kanye nemifula kuncoma ukusebenzisa ukulungiselela kuphela izithelo ezomileyo ezimile ngaphandle kwemigodi. Imifino kufanele ihlanzwe ngokucophelela, igcwele ngamanzi abilayo amakhulu futhi ibanjwe cishe ingxenye yesine yehora. Ngemuva kwalokhu, umkhiqizo kufanele ulahlwe ku-colander, uhlanza futhi emanzini abandayo, bese usika izingcezu ezincane ngommese obukhali.
Ukusetshenziselwa izithako ezisele
Isaladi "Ukuthambekela" ngezinkukhu nemifula, ngaphezu kwale mikhiqizo, kufaka phakathi izingxenye ezifana namaqanda inkukhu, ama-walnuts nama-ukhukhamba amasha. Ngakho-ke, ukhukhamba kufanele ihlanzwe kahle, inqunywe ngokweqile, bese ubhala ku-grater enkulu. Ngemva kwalokhu, kubalulekile ukubilisa amaqanda abilisiwe futhi ugaye ngendlela efanayo. Okulandelayo, udinga ukuhlanza u-walnut ohlutshiwe, uwuhlanza emanzini ashisayo, uwume epanini lokuthosiza uphinde uwuqede ngezinhlamvu ezincane.
Inqubo yokwenza isidlo
Ukwenza isaladi "Ukuthambekela", kufanele uthathe ipuleti elingenalutho kodwa elikhulu, usakaze ngokufanayo izinambuzane ezinkukhuziwe ezinkukhuni, uzigcobe ngokucophelela nge-mayonnaise ye-fat fat content, kanye nama-ukhukhamba ahlanzekile, amaqanda agayiwe, umlimi omuncu kanye nama-walnuts. Zonke izingxenye (ngaphandle kwezokugcina) nazo zidingeka ukuba zihanjiswe ngamayonnaise noma ukhilimu omuncu omuncu. Ekugcineni, lesi sidlo sinconywa ukuba sihlobise nge-dill fresh ne-parsley, kanye nezicucu zomlimi noma ikhukhamba.
Ungakhonza kanjani nge-dinner
Ngaphambi kokukhonza, isaladi esiphundu nephunga elimnandi "Ukuthambekela" (iresiphi enkukhu, amantongomane kanye nemifula ekhulunywe ngenhla) kufanele igcinwe efrijini amahora angu-1-3. Phakathi nalesi sikhathi, ngamunye ubeke ungqimba uyobamba imayonnaise, iyoba yigazi futhi ithenda. Kufanelekile ukuphawula ukuthi ngokuvamile isaladi lesenyama enjalo isetshenziselwa izivakashi ngaphambi nje kwesitsha esikhulu esishisayo.
Isaladi likaCallas. Iresiphi kanye nesinyathelo ngesinyathelo sokupheka
I-Vitamin isaladi kusuka ku-anyanisi oluhlaza
Lungisa isaladi "i-Goldfish", umangaze indlu!
Theory kwenqondo Yomthetho. ithiyori kwenqondo imithetho Lokudabuka
Igazi Ingane: imininingwane ewusizo
Hitler: I ubuzwe. U-Adolf Hitler. indaba
Yini ehlanganisiwe isinkwa esimhlophe ngokuhambisana ne-GOST?
Indlela ukususa Smartinf. ru kusuka kwikhompyutha yakho ngokuphelele lolu hlelo?